Leek sii kordhaya | February 2020
Smokehouse for hot and cold sigaar cabbin, sifooyinka ay
Editor Ee Doorashada February 19,2020
Ugu Weyn Ee Leek sii kordhaya
Xeerarka sii kordhaya ee cagaarka ah ee beertaada
Leek ma aha mid caan ah sida caadiga ah, oo ma aha mid aad u fudud in la helo on sariirta beerta dalka. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu jecel yahay in muddo dheer la fahmo in beerashada warshadani ay tahay mid aad u jaban oo sahlan. Waxaa intaa dheer, geedi socodka ah ee caleemaha sii kordhaya ku dhowaad kama duwan ka beerista caadiga ah ee dhammaan dhirta beerta, iyo sidoo kale keeno badan oo farxad.
Fasalada ugu wanaagsan ee raspberry huruud ah: waxa loo dooranayo beerista goobta
Sida loo abuuro abuur abuur ah oo laga bilaabo abuurka: beeritaanka iyo daryeelidda mallow beerta
Caan ka ah fennel sii kordhaya. Tilmaamaha wax soo saarka abuurka iyo geedo
Sidee iyo goorma ayaad u baahan tahay in guriga lagaa caawiyo?
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee mashiinka MTZ-80 ee beeraha
Basbaas macaan waa dalag aad u caan ah oo ka mid ah beeralayda qudaarta. Tani waxaa loo sharaxay dad badan. Waxay ka kooban tahay fitamiino iyo macdano waxtar leh, tiradaas oo ka badan tamaandhada iyo eggplants, waxayna leedahay wax lamid ah mowduuca ascorbic acid. Pepper wuxuu ku qurxin doonaa wax saxan oo ku saabsan miiskaaga fasaxa, wuxuu siin doonaa dhadhan macaan iyo caraf udgoon. Read More
Cuntada xayawaanka: waa suurtogal in ay dillaan iyo waxa dhici doona haddii aad siiso?
Guryaha waxtar leh iyo codsiga guarana
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Leek sii kordhaya 2020